Iberibe ọkụkọ & ọbọgwụ - Goodao Technology Co., Ltd.
Iberibe ọkụkọ na ọbọgwụ bụ otu n'ime nri nkịta dị mkpa dabere na ọkụkọ na anụ ọbọgwụ. Anụ ọkụkọ na ọbọgwụ nwere nnukwu ọdịnaya protein yana nwere vitamin dị iche iche, nke nkịta nwere ike gbarie ya ngwa ngwa ma rie ya. A na -ahụ ụdị anụ ahụ nke ọma na anụ nwere njiri mara ụtọ, isi siri ike ma dịkwa njikere ịnụ ụtọ mgbe emepere ya.
Ọnụ nri (g/ụbọchị)
Protein Crube: 47%min
Abụba Crube: 0.1% max
Fiber Crube: karịa 7.7%
Ntụ: 4.3% kachasị
Mmiri: 14% max
Aha ngwaahịa Mpekere ọkụkọ na ọbọgwụ
Ngwaahịa bụ isi ihe Anụ ọkụkọ na ọbọgwụ
Anyị kwenyere na mmekorita okwu ogologo oge bụ n'ezie nsonaazụ nke oke, nkwado agbakwunyere, nzute bara ụba na kọntaktị nke onye na -ebubata ngwa ahịa China ngwa ngwa ọkụkọ ngwa ngwa ngwa ngwa ọkụkọ, anyị na -anabata ezigbo ndị enyi sitere n'akụkụ niile nke ndụ ka ha na -arụkọ ọrụ. anyị.
Onye na -ebubata ihe na -ebubata ihe ntanetị nke China Chicken, ọkụkọ nri ngwa ngwa, anyị nwere nganga inye ndị na -anya ụgbọ ala niile ihe anyị nwere gburugburu ụwa, ọrụ anyị na -agbanwe agbanwe, na -arụ ọrụ ngwa ngwa yana ụkpụrụ njikwa njikwa siri ike nke ndị ahịa na -akwado ma na -eto mgbe niile.
Iji kwalite usoro njikwa ugboro ugboro site n'iwu gị nke "n'eziokwu, ezi okpukpe na ịdị mma bụ ntọala nke mmepe ụlọ ọrụ", anyị na -amịkọrọ nke ọma ihe ngwọta dị na mba ụwa, ma na -emepụta ngwa ahịa ọhụrụ mgbe niile iji gboo mkpa ndị na -azụ ahịa. Ọnụ ego azụmaahịa 2019 China IQF Frozen Halal Skinless Chicken Breast, Ebumnuche nke ụlọ ọrụ anyị bụ ibi ndụ ọtụtụ ndị ahịa afọ ojuju mgbe niile, wee guzobe mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na mmekọrịta ịhụnanya n'etiti ndị na -azụ ahịa na ndị ọrụ gburugburu ụwa niile.
Ọnụ ego azụmaahịa 2019 ọkụkọ ọkụkọ, anụ ọkụkọ ara enweghị akpụkpọ anụ, na-ekwusi ike na njikwa ahịrị dị elu na onye na-eweta nduzi atụmanya, anyị emeela mkpebi anyị ịnye ndị na-azụ ahịa anyị site na iji ịzụrụ ihe mbụ na obere oge ka onye na-eweta ahụmịhe ọrụ na-arụ ọrụ. N’ịchekwa mmekọrịta na -enye aka na atụmanya anyị, anyị na -emepụta ngwaahịa anyị ugbu a na -edepụta ọtụtụ oge iji zute ihe ọhụrụ ma rapara na usoro azụmaahịa ọhụrụ a na Ahmedabad. Anyị dị njikere ihu ihe isi ike ihu ma mee mgbanwe iji ghọta ọtụtụ ohere enwere na azụmaahịa mba ụwa.
Nke gara aga: Mpekere ọkụkọ na beef
Osote: Akọrọ Duck Jerky